Crisis in Zimbabwe Coalition Yopikisa Kuvandudzwa kweBumbiro reMitemo yeNyika
Masangano makumi mana nematanhatu anoumba sangano reCrisis in Zimbabwe Coalitiona aita chisungo chekuenda kuparamende pamwe nematare edzimhosva nechinangwa chekumisa bhiri remutemo weConstitutional Amendment Bill No.2 kuti risazeyiwe nedare reSenate.
Crisis in Zimbabwe Coalition inoti haisi kufara kuti hurumende yave kutosandura bumbiro remitemo yenyika isati yatevedza bumbiro iri zvizere.
Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition, VaRashid Mahiya, vati paramende haina mvumo yekusandura bumbiro iri sezvo veruzhinji vakaramba kuti bumbiro risandurwe.
Vati vachaendesa gwaro rezvichemo kuparamende kuti imire zvairi kuita.
Kunze kwekuenda kuparamende, VaMahiya vati vachaendawo kumatare edzimhosva kuti amise kusandurwa kwebumbiro remitemo yenyika.
Vatiwo vachafambawo vachikurudzira veruzhinji kuti varambe kusandurwa kwebumbiro nekuratidzira vachiti kushandura bumbiro iri kunopa masimba akanyanya kumutungamiriri wenyika.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions VaPeter Mutasa, vati vanotsigira danho rekuenda kuparamende nematare vachiti vashandi vange vasingatarisire kuti bumbiro richasandurwe asi kuti mitemo yavo ivandudzwe kuti ienderane nebumbiro riripo.
Mukuru weMedia Centre, VaEnerst Mudzengi, vati zviri kurongwa nemasangano anoshanda akazvimirira zvakakosha vachiti bumbiro rinofanira kusandurwa zvinofadza munhu wese.
Nyanzvi munyaya dzemutemo zvakare vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe of Zimbabwe, Professor Lovemore Madhuku, vati zviri kurongwa nemasangano aya zvakanaka asi hapana chinobuda kuparamende.
Vatiwo kuenda kumatare kwanaka asi dambudzirko ririko nderekuti vatongi vematare vachawanawo cheuviri pakusandurwa kwebumbiro remitemo.
VaMadhuku vati dambudziko guru raita pabumbiro reZimbabwe rakanyorwa nevezvematongerwo enyika kusanganisira vamwe vasisafare nekusandurwa kwave kuitwa.
VaMadhuku, avo vanova mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly, vatiwo kusandurwa kwebumbiro kuri kuitwa pachishandiswa chikamu chembumbiro iri che Section 328 icho chakabvumiramwa nemapato eMDC neZanu PF zvikatsigirwa neveruzhinji paReferendum ya2013.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu,VaNqobani Sithole, vakwira kudare reConstitutional Court svondo rapera vachipikisa mabatirwo akaitwakuitwa bhiri reConstitutional Amendment Bill No. 1, iro rinopa hwaro hwekuumbwa kwe Constitutional Amendment Bill Number 2.
Dare harisati rapa mutongo waro nyaya iyi.
Bhiri reConstituional Amendment Bill Number 2 rakatopasa muNational Assembly uye rave kuSenate uko rinotarisrwa kupasa risati raendeswa kunosainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo.
Zanu PF iri kutsigira kusandurwa kwebumbiro iri zvizere, ichitsigirwa nevamwe veMDC kunyange hazvo vamwe mubato iri vari kupikisa izvi.